SUUQA: Arsenal oo si layaab leh kusoo gashay dagaalka loogu jiro saxiixa xiddiga xorta ah ee Dani Alves. – Gool FM
SUUQA: Arsenal oo si layaab leh kusoo gashay dagaalka loogu jiro saxiixa xiddiga xorta ah ee Dani Alves.
(London) 15 Luulyo 2019. Kooxda kubadda cagta Arsenal ayaa si layaab leh ugu soo biirtay tartanka loogu jiro saxiixa xiddiga aan qandaraaska heysan ee Dani Alves.
Tababare Unai Emery ayaa doorbidaya inuu xoojiyo daafaciisa fasal ciyaareedka bilaaban doona, balse kaliya waxaa la siiyay 45 Malyan oo Pound si uu suuqa uga dukaameysto maadaama ay kooxda ku fashilantay iney usoo baxdo koobka UEFA Champions League.
Xiddigii hore Barcelona, Juventus iyo Paris Saint-Germain (Dani Alves) ayaa u muuqda mid dareen ka sameynaya suuqa kala iibsiga ciyaartoyda, waa hadii uu ogolaado inuu ku biiro kooxda waqooyiga London.
Dani Alves waa mid leh khibradd weyn, wuxuuna ahaa kabtankii qaranka Brazil ee ku guuleystay Copa America, wuxuuna dhigay rikoor cusub maadaama uu qaaday koobkiisii 40-aad isagoo 36-jir ah.
Si kastaba, Dani Alves saacaddiisa garoomada kubadda cagta waa sii dhamaaneysaa, balse waxaa suuragal ah inuu doorbidayo koox ka ciyaareysa koobka Champions League, taasoo waji gabax ku noqoneysa kooxda ka dhisan garoonka Emirates Stadium.
“Messi waa halyeey sida LeBron James” - Antoine Griezmann